Duulimaad cusub oo ka imanaya Washington ilaa Lagos, Nigeria oo ku socda United Airlines hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaad cusub oo ka imanaya Washington ilaa Lagos, Nigeria oo ku socda United Airlines hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Wararka Nigeria • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
United Airlines waxay ku shaqeyn doontaa wadadan Boeing 787 Dreamliner oo ay ku jiraan 28 kursi oo ah meherad United Polaris ah, 21 kursi oo ah lacagta qaaliga ah ee United Premium Plus, 36 kursi oo ah Economy Plus iyo 158 kursi dhaqaalaha caadiga ah. Duulimaadyadu waxay ka tegi doonaan Washington, DC Isniinta, Khamiista iyo Sabtida waxayna ka soo laaban doonaan Lagos Talaadada, Jimcaha iyo Axadda.
Shirkadda diyaaradaha ee United Airlines ayaa ku dhawaaqday adeeg cusub oo duulimaad oo ka bilaabanaya Washington, DC ilaa Lagos, Nigeria.
Shirkadda diyaaradaha ee United Airlines ayaa saddex duulimaad oo toddobaadle ah ka samayn doonta Washington, DC iyo Lagos, Nigeria oo la arki doono November 29, 2021.
Duulimaadka cusub wuxuu bixin doonaa isku-xir hal-ku-habboon oo ku habboon in ka badan 80 goobood oo ku yaal Ameerika oo dhan.
United Airlines ayaa ku dhawaaqday maanta in adeeg cusub oo u dhexeeya Washington, DC iyo Lagos, Nigeria uu bilaaban doono 29ka Nofembar (oo ku xiran oggolaanshaha dawladda). Shirkaddu waxay samayn doontaa saddex duulimaad oo toddobaadle ah oo isku xira caasimadda Mareykanka iyo magaalada ugu weyn Nigeria, oo sidoo kale ah meesha ugu sarraysa ee Galbeedka Afrika ee ay ku safraan dadka Maraykanka deggan.
“Duulimaadkan cusub ee ku socda Lagos waxaa si aad ah u filayay macaamiisheena waxayna bixisaa adeegii ugu horreeyay abid oo aan joogsi lahayn oo u dhexeeya Washington, DC iyo Nigeria, iyo sidoo kale ku-habboonaan, xiriir hal-joogsi ah in ka badan 80 meelood oo Ameerika oo dhan oo ay ku jiraan Houston iyo Chicago, ”ayuu yiri Patrick Quayle, United Airlines'madaxweyne ku xigeenka shabakadda caalamiga ah iyo isbahaysiga. "Anigoo ku hadlaaya dhammaan United waxaan jeclaan lahayn inaan si dhab ah ugu mahadcelinno Maamulka Duulimaadyada Rayidka ah ee Nigeria iyo Waaxda Gaadiidka Mareykanka oo nagu taageeray qorshayaasheenna ku aaddan adeeggan."
Carl Schultz, oo ah ku -simaha madaxweyne ku -xigeenka horumarinta ganacsiga ee shirkadda diyaaradaha ee Metropolitan Washington Airport Authority. “Lagos waxay ku biireysaa ku dhawaad ​​50 meelood oo kale oo caalami ah oo aan joogsi lahayn oo ay hadda u adeegto albaabka Gobolka Caasimadda Qaranka ee adduunka.”
United Airlines wuxuu ku shaqayn doonaa wadadan a Boeing 787 Dreamliner oo ay ku jiraan 28 kursi ganacsi oo United Polaris ah, 21 kursi oo ah lacagta qaaliga ah ee United Premium Plus, 36 kursi oo ah Economy Plus iyo 158 kursi dhaqaalaha caadiga ah. Duulimaadyadu waxay ka tegi doonaan Washington, DC Isniinta, Khamiista iyo Sabtida waxayna ka soo laaban doonaan Lagos maalmaha Talaadada, Jimcaha iyo Axadda.
Duulimaadkan cusub wuxuu ku dhisanyahay ballaarinta United ee Afrika wuxuuna xoojinayaa booska hoggaamineed ee United ee Afrika laga soo bilaabo aagga metro DC, iyada oo duulimaadyo ka badan kuwa qaaradda ay ka badan yihiin kuwa kale. Sannadkan uun, United waxay bilowday adeeg cusub oo u dhexeeya New York/Newark iyo Johannesburg, Koonfur Afrika iyo inta u dhaxaysa Washington, DC iyo Accra, Ghana. Bishan December iyo Janaayo, United waxay kordhin doontaa adeegeeda Accra sedex duulimaad todobaadle ah oo maalinle ah* iyadoo macaamiishu u safrayaan guryahooda fasaxa jiilaalka. United ayaa sidoo kale soo celinaysa adeeggeedii caanka ahaa ee u dhexeeyay New York/Newark iyo Cape Town, South Africa 1 -dii December.
Duulimaadyada cusub ee United waxay u hoggaansan yihiin qawaaniinta COVID-19 ee waddan kasta iyo macaamiishu waa inay hubiyaan shuruudaha goobta ka hor intaadan safrin.